Budada Cycloastragenol - Warshad Soosaara
Cycloastragenol waa qeyb ka mid ah cuntada ka hortagga gabowga ee da'da.
Budada Cycloastragenol (78574-94-4) fiidiyow
Cycloastragenol budo Smamnuucista
Product Name Budada Cycloastragenol
Isku mid ahaanshaha astra memrangenin
Molecular Wsideed 490.7 g / mol
Color caddaan ah si beige ah
SOlubility DMSO: 10 mg / mL, cad
Application Cycloastragenol waa firfircoon awood telomerase ah. Sidoo kale, waxay kuxirantahay la-dagaallanka gabowga daawo-dhaqameedka Shiinaha.
Cycloastragenol waa qeyb ka mid ah cuntada ka hortagga gabowga ee da'da. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daryeelka maqaarka qaaliga ah iyo qaacidooyinka la isku qurxiyo. Cycloastragenol waxaa markii ugu horaysay suuq loogu iibgeeyay kaabayaasha cuntada ee Maraykanka sanadkii 2007 iyada oo lagu bixinayo magaca TA-65, taasina waa sababta TA 65 ama TA65 ay wali ugu badantahay magaca loo yaqaan 'cycloastragenol'.
Waa maxay Cycloastragenol?
Cycloastragenol waa molecule laga soo qaatay geedaha Astragalus membranaceus. Geedaha Astragalus ayaa loo isticmaali jiray dawada Shiinaha qarniyo badan. Shiinuhu waxay sheegteen in Astragalus cimri dheereyn karo oo loo adeegsaday daweynta daalka, xasaasiyada, hargabka, cudurka wadnaha iyo sokorowga.
Cycloastragenol waa mid ka mid ah waxyaabaha firfircoon ee ku jira Astragalus. Cycloastragenol wuxuu leeyahay qaab qaab kimiko ah oo la mid ah kan loo yaqaan 'Astragaloside IV molecule', laakiin way ka yar tahay uguna weyn tahay bioavirka la heli karo, taasoo u saamaxaysa qaadashooyinka hoose in la qaato. Horaa loo isticmaalaa sidii immunostimulant sababta oo ah awooda uu u leeyahay inuu kordhiyo faafitaanka T lymphocyte. Si kastaba ha noqotee, waa dhismaheeda gaarka ah ee ka-hortagga gabowga ee danta u leh bulshada cilmiga ah.
Cycloastragenol wuxuu kiciyaa hagaajinta dhaawaca DNA isagoo kicinaya telomerase, Nucleoprotein enzyme kaas oo kiciya isku-darka iyo koritaanka DNA telomeric. Telomeres waxaa laga sameeyaa fiilooyin khafiif ah waxaana laga helaa talooyinka koromosoomyada. Joogtaynta xasilloonidoodu waxay u suurtogelisaa unugyada inay ka fogaadaan jiritaanka sumcadda iyo kordhinta aan xadidnayn ee ka baxsan 'xadka Hayflick'. Telomeres waxay gaabinaysaa wareeg kasta oo unug unug ah, ama markay ku dhacdo diiqadda oksidheer. Ilaa hadda, tani waxay ahayd farsamo aan laga maarmin oo gabow ah.
Farsamooyinka ficil Cycloastragenol
Tiro badan oo daraasado ah ayaa muujiyey in soo gaabinta horumarka telomeres-ku uu si dhow ula xiriiro cudurro badan oo la xiriira da'da (cudurrada wadnaha, caabuqyada, iwm) iyo sidoo kale saadaalinta dhimashada lama filaanka ah ee maadooyinka waayeelka. Telomeres-ka wuxuu gaabiyey wareegga kasta oo qeybinta unugyada, ama marka ay ku dhacdo walaaca fekerka. Ilaa hadda, tani waxay ahayd hab aan laga maarmi karin oo gabowga.
Telomerase waa enzyme-ka nucleoprotein kaas oo xakameeya iskuxirka iyo koritaanka DNA-da telomeric isla markaana kicineysa hagaajinta waxyeelada DNA.
Cycloastragenol waxay kicisaa oo kicisaa enzyme-ka, sidaa darteed waxay yareysaa yareynta telomereska waxayna sidoo kale kordhineysaa tirooyinkooda. Sidan, waxay u oggolaaneysaa sii dheereynta telomereska iyo natiijada, taas oo kordhinaysa cimriga nolosha.
Miisaankiisa hooseeya awgeed, Cycloastragenol wuxuu si fudud ugu gudbaa derbiga xiidmaha. Qiyaasta fiicnaanta ayaa u oggolaaneysa waxtarka sare, xitaa qiyaasta hoose. Kordhinta maalinlaha ah keligeed, ama isku darka ama lagu beddelo, astragaloside IV, ayaa sidaas awgeed gacan ka geysan doonta dib u dhigidda gabowga isla markaana si dabiici ah u dheereeya filashada nolosha.
Astragalus membranaceus wuxuu ka mid yahay geedaha aasaasiga ah ee taariikhda Daawada Dhaqanka Shiinaha sida daaweynta dabiiciga ah ee lagu daaweeyo daalka, jirrada, boogaha, kansarka, sanboorka, istaroogga, cimri dherer iwm Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka muhiimka ah ee budada cycloastragenol waa sida saameyn kahortagga gabowga iyo taageerada difaaca jirka.
Cycloastragenol iyo kahortaga cudurada
Cycloastragenol waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo nidaamka difaaca jirka, jeermiska bakteeriyada, iyo antiinflammatory, si looga fogaado hargabka caadiga ah iyo infekshannada habka neefsashada kore. Waxaa loo istcimaayey sidii xoojinta difaaca sababta oo ah waxay awood u leedahay inay sare u qaado fiditaanka T lymphocyte. Si kastaba ha noqotee, waxa bulshada cilmigu si sii kordheysa u daneynayaan waa iska caabinta da'da weyn. Cycloastragenol wuxuu dhiiri galiyaa DNA-da si loo dayactiro waxyeelada iyadoo la bilaabayo telomerase loona ogolaado nukliyeerka nukliyeerka inuu xakameeyo isku xirnaanta iyo koritaanka telomere DNA.
Cycloastragenol iyo ka hortagga gabowga
Ka hortagga gabowga waa faa iidada muuqata ee cycloastragenol. Cycloastragenol kaliya maahan dib-u-dhigga duugista aadanaha, laakiin intaa waxaa dheer waxay kordhisay xasaanadda, walxaha sunta ah, ilaalinta unugyada wadnaha, badiyaa waxay ka timaadaa astrogaloside (Astragaloside Ⅳ) hydrolysis.
Faa'iidooyinka kale ee Cycloastragenol
budada cycloastragenol waxay saameyn ku leedahay yareynta walwalka iyo kahortagga jirka ee kadeedka kala duwan, oo ay kujiraan culeyska jirka, maskaxda, ama shucuurta;
budada cycloastragenol waxaa ku jira antioxidants, oo ka ilaaliya unugyada waxyeelada ay keento xag-jiriinta bilaashka ah;
budada cycloastragenol waxay saameyn ku leedahay yareynta cadaadiska dhiigga, daaweynta sonkorowga iyo ilaalinta beerka.
Cycloastragenol Waxyeelooyinka budada
Illaa iyo hadda, ma jiraan wax warbixin ah ama dib-u-eegis ah oo ku saabsan saameyn xun ama diidmo qaadashada dheecaanka cycloastragenol.
Cycloastragenol qiyaasta dheeriga ah
Isku-darka Cycloastragenol waa mid isbarbar dhig ku cusub oo aan ahayn noocyo badan oo suuqyada lagu iibiyo, oo ma jiro qiyaaso lagu taliyay in la helo. Marka loo eego khibradeena, qiyaasta waxay ku kala duwan tahay ulajeedooyin kala duwan, da 'kala duwan. Dabcan cycloastragenol ayaa aad uga xoog badan Astragaloside IV oo xaddiga lagu taliyay uu yahay 50mg maalintii. In kasta oo loogu talagalay cycloastragenol, qaadashada min 10mg ilaa 50mg waa hagaagsan tahay. Odaygu wuxuu ubaahanyahay inuu qaato wax kabadan dadka da'da dhexe. Qaar ayaa soo jeedinaya in laga bilaabo 5mg maalin kasta, ka dibna si tartiib tartiib ah ugu dar. Maaddaama cycloastragenol ay tahay soo saaritaan dabiici ah, waxay qaadan kartaa waqti in la arko waxyeelada, qiyaastii lix bilood.
Cycloastragenol ayaa qaar ka mid ah u noqotay wakiil mucjiso ah oo ka hortaga gabowga. Daraasadihii hore waxay u muuqdaan kuwo rajo leh, iyagoo muujinaya inay awood u leedahay inay kordhiso dhererka telomere, si kastaba ha ahaatee waxaa wali jira la'aanta cilmi baaris tayo leh oo dib loo eegay. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira xoogaa walaac ah in qaadashada Cycloastragenol ay kordhin karto halista kansarka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, daraasadaha cilmi-baarista ma aysan awoodin inay dhisaan halista kansarka ee la xiriirta adeegsiga Cycloastragenol.
Cycloastragenol waxay umuuqataa xarun rajo leh oo kahortaga gabowga. In kasta oo aan la xaqiijin inay kordhinayso cimriga haddana waxaa la muujiyey inay yareyneyso kala duwanaanshaha da'da la xiriirta biomarkers. Intaas waxaa sii dheer waxaa la muujiyay inay yareyneyso calaamadaha gabowga sida xariiqyada wanaagsan iyo duuduubka. Waxay sidoo kale yareyn kartaa halista cudurrada xumaada sida Alzheimers, Parkinson's, retinopathies, iyo cataracts.
Cycloastragenol isticmaalka budada iyo codsashada
Cycloastragenol waxaa loo isticmaalaa daaweynta, xakamaynta, kahortaga, & hagaajinta cudurada soo socda, xaaladaha iyo astaamaha:
Cycloastragenol sidoo kale waa loo isticmaali karaa ujeedoyinka aan halkan lagu xusin.
Budada cycloastragenol budada ah waxaa loo isticmaalay dhulka hoose:
Lagu dabaqaa goobta cuntada, waxaa badanaa loo isticmaalaa wax lagu daro cuntada;
Lagu dabaqay maaddada waxsoosaarka caafimaadka, soosaarahan wuxuu waxtar u leeyahay jirka aadanaha;
Lagu dabaqay garoonka la isku qurxiyo, sida nooc ka mid ah ashyaa'da ceyriinka ah, waxay ku dari kartaa isku-qurxin dabiici ah.
Waxyaabaha ka soo horjeedka gabowga ee cycloastragenol oo ay soo saartay biotransformation.Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G.Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 1080 / 14786419.2019.1662011.
Cycloastragenol: Murashax riwaayad xiiso leh oo ku saabsan cudurrada la xiriira da'da YY Y et al. Exp Ther Med. (2018) Ka-hortagga gabowga ee cycloastragenol oo ay soo saartay biotransformation. Chen C, Ni Y, Jiang B, Yan S, Xu B, Fan B, Huang H, Chen G. Nat Prod Res. 2019 Sep 9: 1-6. doi: 10.1080 / 14786419.2019.1662011
Cycloastragenol way diidi kartaa firfircoonida STAT3 waxayna kobcin kartaa apoptosis-ku-kicinta paclitaxel ee unugyada kansarka caloosha. Hwang ST, Kim C, Lee JH, Chinnathambi A, Alharbi SA, Shair OHM, Sethi G, Ahn KS. 2019 Jun
Astragaloside VI iyo cycloastragenol-6-O-beta-D-glucoside waxay kor u qaadaan bogsashada nabarka ee ku jira vitro iyo vivo.Lee SY et al. Phytomedicine. (2018)